१० दिन अगाडि चोरबाटोबाट नेपाल प्रवेश गरेका थिए कपिलवस्तुुका कोरोना संक्रमित | Mechikali Daily
१० दिन अगाडि चोरबाटोबाट नेपाल प्रवेश गरेका थिए कपिलवस्तुुका कोरोना संक्रमित
Posted By: मेचीकाली डेस्कon: २५ बैशाख २०७७, बिहीबार १९:३७
दश दिन अगाडि लुुकिछिपी कपिलवस्तुु प्रवेश गरेका थिए संक्रमित दुुई युुवा
बुुटवल । कपिलवस्तुुमा बिहीबार राति कोरोना संक्रमण पुुष्टि भएका दुुई युुवा दश दिन अगाडि चोरबाटोबाट लुुकिछिपी नेपाल प्रवेश गरेको पुुष्टि भएको हो । कपिलवस्तुु मायादेवी–८ विजुुवाका भागेर भारतको मुुम्बईबाट नेपाल आएको कपिलवस्तुुका प्रमुुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पुुष्टि गरे ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुुमा परीक्षण गर्दा उनीहरुमा कोरोना–१९ पोजेटिभ देखिएको हो । कपिलवस्तुुकै नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेको थाहा पाएपछि उनीहरुलाई स्थानीय समातेर मायादेवीको तिर्थादेवी छत्रपाली माविको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । योसँगै प्रदेश पाँचमा कोरोना संक्रमितको संख्या २६ पुुगेको छ । संक्रमित युुवालाई बुुटवल धागो काराखानास्थित कोरोना विशेष अस्पतालको आइसोलेसनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । उनीहरुसँग अन्य चार जना युुवाहरु पनि सँगै आएको बताइएको छ ।
बाँकेको नेपालगञ्जमा २३, रुपन्देहीमा २ र कपिलवस्तुुमा दुुईजना विरामी छन । बिरामी थपिएसँगै प्रदेशमा कोरोनाको त्रास पनि बढेको छ । पछिल्लो समय भारतबाट लुुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्नेबाट जोखिम बढेको छ । रुपन्देहीका संक्रमित युुवा पनि वैशाख ५ गते भारतको नयाँदिल्लीबाट लुुकिछिपी नेपाल प्रवेश गरेका थिए ।
उनीहरुको यात्रा बिवरण र सम्बन्ध बारे प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मी आजदेखि परिचालन गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोद गिरीले जनकारी दिए । कपिलवस्तुुको सीमा क्षेत्रमा १ हजार २ सय प्रहरी फोर्स तैनाथ गरे पनि लुुकिछिपी प्रवेश गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।
परीक्षणको लागि किट अभाव भएपछि रुपन्देहीको भैरहवास्थित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण रोकिएको छ । प्रयोगशालाका निमित्त प्रमुुख डा. राजेन्द्र कुुमार गिरीले किट अभाव भएपछि कपिलवस्तुुको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थ्रेस स्वाब परीक्षणका लागि काठमाडौं टेकुु पठाइएको जानकारी दिए ।